Maalinta: 16-ka July, 2019
Renault Sales Down Ku saabsan 7!
Kooxda Renault Group waxay ku guuleysatay inay iska caabiso hoos u dhaca 7,1 ee suuqyada adduunka, hoos u dhaca boqolkiiba 6,7, waxayna dib u haysay saamigeeda suuqa ee 1 ee 938 milyan 579 milyan oo ah xNUMX gawaarida iibka ah ee 4,4 milyan. Kooxda sanadka [More ...]
Turkey baabuur Factory ayaa sii daayay ka iibsadaan ad cusub iyada oo Agaasinka Guud ee TEO. Sida laga soo xigtay war-bixinta shaqaale joogto ah oo ka shaqeeya ISTKUR WTO 26 ayaa la qori doonaa. Doonista codsiga qorista shaqaalaha [More ...]
Murat 124 Lovers ayaa ku kulmay Bilecik
Fannaaniinta Murat 124 ayaa ku kulmay Bilecik munaasabad taas oo lagu xaqiiqsaday iyadoo ay ku dartay tabaruca degmada Bilecik. Laga soo bilaabo Istanbul ilaa Kahramanmaraş, Adana ilaa İzmir, munaasabaddu waxay isu keentey jaceylka qadiimiga ah ee ka socda magaalada 81 waxayna ku bilaabeen xero lagu aasaasay Pelitözü Gölpark. dheeraad ah [More ...]
Xuduudda Jaraa'idka ee Jaraa'idka ayaa la furay
Dowladda Hoose ee Magaalada Kayseri ee ku taal Isgoyska Cusmaan Kavuncu Boulevard Terminal Terminal ee isgoyska isgoyska dabaqyada badan waxaa loo furay gaadiid. Isagoo hadlaya inta lagu gudajiray furitaanka maalgashiga TL million 25 Duqa Magaalada Dr .. Memduh Büyükkılıç, shaqsi ahaan [More ...]
Kardemir Beddelka Gawaarida Guriga!
Karabük Iron iyo Iron Industry iyo Trade Inc. (KARDEMIR), is-dhexgalka warshadaha gawaarida oo noqday alaab-qeybiye wanaagsan ayaa soo sheegay in hadafyada istiraatiijiyadeed ee shirkadda. Iyada oo loo marayo wadashaqayn maamul oo hufan oo daahfuran, [More ...]
Halkalı Shirkadda Kapıkule Railway Wareegtada Mashruuca 18 ee Luulyo
Xisbiga AK Parti Edirne Guddoomiyaha Gobolka Ilyas Akmeşe, Halkalı - Mashruuca Tareenka ee Kapikule ayaa hoos u dhigay munaasabadda dhismaha dhismaha oo lagu qaban doono Edirne bishii July ee 18. Akmeşe, bayaan qoraal ah, mashruuca ganacsiga caalamiga ah [More ...]
Dadka reer Diyarbakir waxay doonayaan in mashruuca taraamulka la galo. Dadku waxay hadda rabaan inay si dhaqso ah, safar iyo ammaan ah u safraan. Sida laga soo xigtay warbixinta Seyfettin Eken oo laga soo xigtey South Eastðugüncel; "More [More ...]
RayHaber 16.07.2019 Warbixinta Shirka
Hagaajinta Kala Duwanaanta ee u dhaxeeya Divrigi iyo Erzincan Energy Transmission Works Works
Wararkii Ugu Danbeeyay Ee Alanyaspor
Duqa magaalada Murat Yücel wuxuu joojiyey wada hadaladii ku saabsanaa balan qaadkii N 12 lira ee Alanyaspor qofkiiba rakaab toban ka mid ah gawaarida xamuulka qaada oo qaada 1 kun oo qof maalin walba: “Balanqaadku waa la ilaalin doonaa Mehmet Marka loo eego Mehmet Al oo Sabah ah; [More ...]
Tareenada Qaran ee Xawaaraha Sare ee kuyaala 2023. By 2023, tareenada xawaaraha sare leh ayaa la qorsheeyay in ay noqdaan kuwo si buuxda u shaqeeya. Sida laga soo xigtay wargayska Miray Cimen; "Iyada oo taageero dawladda ee Turkey siiyey warshadaha ee guryaha, waddooyinka tareennada ah [More ...]
Ciyaartoyda xiiseeya isboortiga waxay sugayaan xamaasad weyn, oo ay soo qaban qaabisay Dowlada Hoose ee Magaalada Istanbul Samsung Bosphorus Intercontinental Dabaasha Race 21 ayaa la qaban doonaa bisha Luulyo. Dabaasha Intercontinental Samsung ee Bosphorus, oo loo arko inay tahay hay'adda dabbaasha ugu wanaagsan adduunka oo dhan [More ...]
Isticmaalka Gawaarida Gaarka loo leeyahay
Duullimaadyada Duullimaadyada Büyük Owl ”waxay ka mid yihiin mashruucii ugu horreeyay ee 100-maalin ee İzmir Duqa Magaalada Tunç Soyer. Tirada ka-faa'iideystayaasha ayaa maalinba maalinta ka dambeysa sii kordheysa. 18 Gacanka laga bilaabo Luulyo [More ...]